जिओ फोर्डको फोर्ड फेस्टिव अफर - sailungonline
३ आश्विन २०७७, शनिबार १८:२२ । काठमाडाैं
जि.ओ. अटोमोबाईल्स प्रा.लि. (जिओ फोर्ड), नेपालकालागिफोर्ड गाडीहरुको अधिकृत बिक्रेताले नेपालमा सबैभन्दाहर्ष उल्लासका साथमनाइने चाडपर्व दसैँ–तिहारलाई लक्षितगर्दैफोर्ड फेस्टिभ अफर ल्याएको छ । यस समयमा गाडीहरुको बिक्रीमा वृद्धि हुने भएकोले धेरै जसो अटोमोबाईल्सब्राण्डले यसै समयमाविभिन्न योजनाहरु ल्याउने गरेका छन ।
यो वर्ष फोर्ड फेस्टिभ अफर अन्र्तगत, ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी, ग्राहकहरुले उपलब्धतीनअफरहरु मध्ये एउटा छनोट गर्न सक्दछन् र नगद छुट, आर्थिक वर्षको लागि सडक कर र एक वर्ष निस्शुल्कबीमा जस्ता नियमितलाभहरु पनिलिन सक्छन् । गाडीको बुकिङ्गमानगद छुट, सडक कर र बीमाको नियमितलाभहरु बाहेक ग्राहकले यी योजनाहरु मध्ये एउटा छनौटगर्न सक्दछन् ।
योजना १ : स्क््रयाज कार्ड–ग्राहकले बक्सबाट ३ वटा स्क््रयाज कार्ड छनौट गरी ४,५०,००० रूपैयाँसम्म जित्ने मौकापाउने छन् । प्रत्येक स्क्याज कार्डमाग्यारेण्टी मूल्य २५,००० रूपैयाँसम्म रहेको र बढीमा यो रु. १,५०,००० सम्म हुनेछ । यो अफरअन्र्तगत ग्राहकहरुले विस्तृत बीमा रआधारभूत असेसोरिज प्राप्तगर्दछन ।
योजना २ : ६ महिने होलिडे–यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकलाई पहिलो ६ महिना बैंकलाई किस्ताभुक्तानीगर्नु नपर्ने हुनाले मासिककिस्ताको तनावबाट छुटकारा दिनेछ । यो योजनामाछापुच्छ«े बैँकमार्फत उपलब्धहुनेछ र जिओ फोर्डले ग्राहकको पहिलो ६ महिनाको ब्याजवापतको रकमतिरि दिनेछ । यो योजनामाग्राहकहरुले असेसोरिज र बीमापनिप्राप्तगर्दछन् ।
योजना ३: स्थगित भुक्तानी यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ३०% रकम डाउनपेमेन्टका साथ बैंकबाट जारी ५०% को डेलिभरी अर्डर दिई गाडी डेलिभरी लिन सक्नेछ । बाँकी २०% को लागिग्राहकलाई ४ महिनाको थपअवधिप्रदानगरिनेछ । यी ४ महिनामाग्राहकले २०% लाई बराबर भागलगाइकिस्तामातिर्नु पर्नेछ । बाँकी रकमतिरी सकेपछि , बैंक लोनको लागि प्रस्ताव अगाडि बढाउने छ ताकिग्राहकले बैंकको किस्तापहिले व्याहोर्न पर्ने छैन ।
यो योजनाफोर्ड फिगो, फोर्ड एस्पाएर, फोर्ड फ्रीस्टाईल र फोर्ड इकोस्पोर्ट को भेरियन्टहरुमा उपलब्ध छ ।
नागरिक एप : अब सरकारी सेवा हातहातमै
‘द भ्वाइस अफ नेपाल-३’ मुख्य प्रायोजक ओपो
फाइभजी : हामीलाई घरमा पनि यसको आवश्यकता किन ?
मोटोरोलाका मोटो जि नाइन प्ले र मोटो इ सेभेन प्लस बजारमा